China ọkwa anaghị agba nchara welded anwụrụ Manufacturers na Suppliers | Mizhang
Igwe anaghị agba nchara Now Pipe
Igwe anaghị agba nchara Square Pipe
Igwe anaghị agba nchara hegzagon Bar
ọkwa anaghị agba nchara welded anwụrụ
Product Ihe: Function & ji mara Standard: JIS, ASTM, GB, DIN, EN Ebe nke Si Malite: China (Chile) Brand Name: Jiangsu Steel Type: welded Steel mezuwo: 200 300 400 600 Ngwa: handrail, steepụ, igwe ndobe, weldmesh ihuenyo , ọnụ ụzọ, mbara ihu Asambodo: SGS BV ISO ịgbado ọkụ Line Type: ERW ọkpụrụkpụ: 0.3mm na 3.0mm Outer dayameta: 9.53mm ka 254mm mbukota: oké osimiri kwesịrị Supplier: Taizhou Hengda ngwaahịa a: igwe anaghị agba nchara welded anwụrụ ekwe ogo: 180 ogo / 90 Degree Polish: Bright ma ọ bụ Mirror ...
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T/T,DP,LC,CASH
Function & ji mara
Steel mezuwo: 200 300 400 600
Ngwa: handrail, steepụ, igwe ndobe, weldmesh ihuenyo , ọnụ ụzọ, mbara ihu
Asambodo: SGS BV ISO
ịgbado ọkụ Line Type: ERW
ọkpụrụkpụ: 0.3mm na 3.0mm
Outer dayameta: 9.53mm ka 254mm
mbukota: oké osimiri kwesịrị
ngwaahịa a: igwe anaghị agba nchara welded anwụrụ
ekwe ogo: 180 ogo / 90 Degree
Polish: Bright ma ọ bụ Mirror, Satin, Hairline,
Production Standard: ASTM A554 / A312 / A249 / A269 / A270
packaging Nkọwa: onye ọ bụla tube na a plastic akpa, mgbe ahụ, ọtụtụ akpa ka a seaworthy kpara akpa na 50kg / ukwu ma ọ bụ 400kg -500kg / ùkwù. Ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
Nzipu Ihe: 15 ụbọchị ejikari
anaghị agba nchara welded anwụrụ-free cuttiing
anaghị agba nchara welded anwụrụ -free cuttiing:
si ọdịdị, Iji na mma.
Igwe anaghị agba nchara welded tube & Pipe
Square akpa, gburugburu akpa, oval ọkpọkọ, pụrụ iche ekara ọjà, empaistic ọjà, oyiyi akwa
ASTM A554, A249, A269 na A270
304: Ni 8%, ČR 18%
316: Ni 10%, ČR 18%
6m ma ọ bụ dị ka ndị ahịa 'arịrịọ
a) Outer dayameta: +/- 0.2mm
b) ọkpụrụkpụ: +/- 0.02mm
c) Ogologo: +/- 5mm
180G, 240G, 320G Satin / Hairline 400G, 600G Mirror imecha
handrail, igwe ndobe, steepụ, weldmesh ihuenyo, ụzọ, window, mbara ihu, nsu, bench, ngwá ụlọ, etc
Skwọsh ule, agbatiri ule, mmiri mgbali ule, crystal ire ere ule, okpomọkụ omume, NDT
Chemical mejupụtara nke ihe onwunwe
Ekweghị ekwe (HV)
Definition nke igwe anaghị agba nchara (Kuchiri ụdị Wikipedia)
Na nkà mmụta banyere ígwè, igwe anaghị agba nchara, na-mara dị ka inox nchara ma ọ bụ inox si French "inoxydable", a kọwara dị ka a steelalloy na a kacha nta nke 10.5% na 11% chromium ọdịnaya site na uka.
Igwe anaghị agba nchara na-adịghị ngwa ngwa corrode, nchara ma ọ bụ ntụpọ na mmiri dị ka nkịtị ígwè na-eme, ma n'agbanyeghị nke ahụ aha ya bụ n'ụzọ zuru ezu Unyi na-àmà, ọtụtụ Ichi n'okpuru ala oxygen, elu salinity, ma ọ bụ ogbenye mgbasa gburugburu. Ọ na-akpọ corrosion na-eguzogide nchara ma ọ bụ CRES mgbe alloy ụdị na ọkwa-adịghị ezu, karịsịa na ụgbọelu ụlọ ọrụ. E nwere dị iche iche akara ule na n'elu risịrị nke igwe anaghị agba nchara ona ebe ndị alloy aghaghị idi. Igwe anaghị agba nchara na-eji ebe ma Njirimara nke nchara na iguzogide corrosion na-achọrọ.
(1): Elu àgwà anaghị agba nchara tube na ezi uche price.
(2): Wide magburu onwe ahụmahụ mgbe-ire ọrụ.
(3): ọ bụla usoro ga-enyocha site ọrụ QC nke insures ọ bụla ngwaahịa àgwà.
(4): Professional mbukota ìgwè nke na-ọ bụla mbukota n'enweghị nsogbu.
(5): Trial iji nwere ike mere otu izu.
(6): Samples nwere ike nyere ka gị chọrọ.
Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa nke igwe anaghị agba nchara na ngwaahịa, gụnyere igwe anaghị agba nchara ji achọ ọjà, ulo oru igwe anaghị welded ọkpọkọ, pụrụ iche ekara ọjà, igwe anaghị agba nchara
mpempe akwụkwọ na wdg Main ihe ndị: 304, 201,202,316,316L, 430 na na.
Previous: ASTM A554 igwe anaghị agba nchara welded tube
Next: Zụlitere Face Weld Olu Flange
304 igwe anaghị agba nchara welded Pipe
Igwe anaghị agba nchara Pipe ịkụ gọlfụ
310s 34*4mm stainless steel seamless pipe
ASTM A554 igwe anaghị agba nchara welded tube
Schedule 40 Seamless Steel Pipe ASTM B729 UNS N...
Ebe ọ bụ na ya oruru, anyị factory e-emepe emepe ụwa nke mbụ na klas na ngwaahịa na ana ụkpụrụ
nke àgwà mbụ. Anyị na ngwaahịa nwetara magburu onwe aha ụlọ ọrụ na valuabletrusty n'etiti ọhụrụ na ndị agadi ahịa ..
Ntekwasa Steel mpempe akwụkwọ, Igwe anaghị agba nchara Now Bar, 310s Stainless Steel Pipe, Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ & eriri igwe, Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ / eriri igwe, Igwe anaghị agba nchara Channel Bar,